आफूलाई गायक र मोडलकै रुपमा चिनाउन चाहन्छुः खेम सेञ्चुरी – झुल्केघाम
माघ १३ १३:५६ १५०
बिर्तामोड , माघ १३ । लोकदोहोरी क्षेत्रमा एक दशकभन्दा लामो समयदेखि सक्रिय छन् खेम सेञ्चुरी । उनका ‘लरि लरिलै’, ‘चिया छानेको’, ‘सोचेँ झै जिन्दगी रैनछ’, ‘झ्यालमा पर्दा छ’ लगायतका गीतले युटुबमा करोड भ्यूज पार गरेका छन् । यी बाहेक उनका अन्य थुप्रै गीत दर्शक तथा श्रोताले रुचाएका छन् । खेमको शब्द, संगीत, स्वर र अभिनयमा हालसम्म ५ सय भन्दा बढी गीत सार्वजनिक भैसकेका छन् ।
म गीतको रेकडिङ र भिडियोको छायांकनमा नै व्यस्त छु । हिजोका दिनमा दर्शक तथा श्रोताले मेरो शब्द र संगीतलाई रुचाउनुभएको थियो भने पछिल्लो समयमा स्वरलाई पनि रुचाउनु भएको छ । मैले आफ्नो मात्र नभई अरुको पनि गीत गाइरहेको छु । म्यूजिक भिडियोमा पनि अभिनय गरिरहेको छु ।
कलाकार भैसकेपछि आफूले जानेका कुराहरु नै दर्शक तथा श्रोताहरुलाई प्रस्तुत गर्ने हो । हिजोका दिनमा मैले शब्द कोरे कै हो, भाका बनाएकै हो । गायकीको हिसाबले पनि मैले कत्तिको राम्रो गीत गाउँछु भनेर मुल्यांकन गर्ने काम श्रोताको हो । अभिनयलाई पनि दर्शकले नै मुल्यांकन गर्ने कुरा भयो । तर, दर्शक तथा श्रोताले मलाई अडियो र भिडियो दुबैमा रुचाउनुभएको छ । यसैले पनि मैले आफूलाई गायक तथा मोडलको रुपमा प्रस्तुत गरेको हुँ ।
म धेरै सपनाहरु बोकेर हिड्ने मान्छे नै होइन । गाउँ समाजको वातावरणले गर्दा पनि लोकदोहोरीप्रति माया अलि बढी भयो । सानैदेखि गीतसंगीत सपना बन्यो ।
गीतसंगीतमा आईसकेपछि आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने, आफूमा कसरी निखारता ल्याउने, कसरी मिहिनेत गरेर अघि बढ्ने ? गीतसंगीत के हो ? मेरो सिर्जनालाई कसरी राम्रो बनाउने र कसरी बजारमा ल्याउने भन्ने सोच नै बढी बोकियो । मेरो अहिलेको सोच पनि यही नै हो । चलचित्रमा आउने कुनै योजना छैन । अनलाईनखबरबाट
फिल्मका यी सुन्दर भिलेन अभिनेत्री
युरोपा लिगमा युनाइटेड अन्तिम १६ मा
‘चेहरे’को पोष्टरमा तस्वीर नअटाएपछि निराश रिया
लोक–ब्याटलमा ‘फूर्के रिबन भर्सेस कर्ली कपाल’
तेस्रो टेस्टमा भारतले इंग्ल्याण्डलाई हरायो
इरान समर्थित मिलिसियाको सिरियास्थित अखडामा हमला गर्न बाइडेनले दिए अनुमति
झापा बिर्तामोड वाणिज्य संघको निर्वाचन समिति विरुद्ध मुद्धा
विद्युत महशुल नबुझाउने ग्राहकको लाइन धमाधम काटिदै